Iinombolo zomnxeba kwiikhonkco - umngcipheko wokhuseleko?
Iinombolo zomnxeba kwiiLinks - ngaba ngumngcipheko wokhuseleko?10
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo ndinike ingxelo ngendlela onokwenza ngayo ukuba iindwendwe zakho zivule usetyenziso lwefowuni kwizixhobo eziphathwayo ngokucofa inombolo yefowuni. Ubukho ngoku buvele bokutshixa ngokungatshintshiyo iSIM khadi okanye ukuseta isixhobo kwakhona kuseto lwefektri ngaphandle kwentshukumo yomsebenzisi.
Ukuhamba ngekhonkco ezikhethekileyo ezihlala phantse kuyo yonke indawo kwaye zinokubizwa ngokuzenzekelayo (iiforamu, ii-imeyile, iiSMS, iikhowudi ze-QR), umzekelo, iPIN engeyiyo okanye iPUK ingeniswa amatyeli aliqela kumzuzwana owahluliweyo. Oku kuya kubamba ngokungathandabuzekiyo iSIM khadi. Oku kufezekiswa kusetyenziswa iikhowudi zolawulo ebekuya kufuneka zingeniswe ngesandla kusetyenziswa ikhiphedi yamanani yokucofa.
Ukuba semngciphekweni kuchaphazela inkqubo yokusebenza kweGoogle kaGoogle ukuya kuthi ga kubandakanya Ice Cream Sandwich (inguqulelo 4.0.x) -isisombululo esisekwe kwisoftware kwingxaki ngohlobo lokuhlaziya inkqubo yokusebenza phantse ayinakwenzeka kwiiselfowuni ezininzi (enkosi kumgaqo-nkqubo wokuhlaziya womenzi!). Endaweni yoko, kuya kufuneka utshintshele kwiinkqubo ezinjengeG Data ye-USSD yeFilter , onokuyifumana simahla kwimakethi ye-Android.